merolagani - यूनाइटेड इन्स्योरेन्स र नेपाल ग्रामिण विकास कहिले तोके बुकक्लोज ?
यूनाइटेड इन्स्योरेन्स र नेपाल ग्रामिण विकास कहिले तोके बुकक्लोज ?
Dec 19, 2017 Merolagani
यूनाइटेड इन्स्योरेन्स (UIC) र नेपाल ग्रामिण विकास बैंक (NGBBL) ले साधारण सभाका लागि सेयरधनी किताब बन्द गर्ने मिति निर्धारण गरेका छन् । युनाईटेड र ग्रामिण दुबैले पुस १२ गतेदेखि साधारण सभा नभएसम्मको लागि सेयरधनी किताब बन्द गर्ने भएका हुन् ।
यूनाइटेडले पुस २६ गते कार्की बैंङ्क्वेटमा बिहान १० बजे २३ औं बार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । गत आर्थिक बर्षमा युनाइटेड इन्स्योरेन्सले १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएपनि अझै ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जगेडा नोक्सानीमा रहेकाले कुनै लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ ।
सभामा लेखापरिक्षक नियुक्ति, सञ्चालक समिति सदस्यहरु (संस्थापक र साधारण) को निर्वाचन र नाफा नोक्सान हिसाब तथा वित्तीय विवरण छलफल गरि पारित गर्ने रहेका छन् ।
उता ग्रामिण विकास बैंकले पुस २८ गते साधारण गर्न पुस १२ गतेदेखि साधारण सभा नभएसम्मको लागि बुकक्लोज गर्ने घोषणा गरेका छ ।
यसअनुसार पुस ११ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनी साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् । नेपाल ग्रामिण विकास बैंकले गत आवमा १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।